Miskii iyo Mascuud (3) – Codka Dhaqdhaqaaqa Somali secular International
Amina Qalin Maal. • Qorraalo
Miskii iyo Mascuud (3)
Miskii iyo Mascuud
Oday Fadxi, waxa loo keenay joornaalkii, isla markiiba wuxu arkay sawirkii wiilkiisa oo gabadha aad u’dheer, qurbadan oo timo ruan dhaxda aga dhebte, afkana akfa u’geliye dad-weyne aad u’tirobadana sacabtun ku waashteen.
Odayga wuu shoogay, oo naxay, oo karkarey! uqaadan-waa ba ku dhacay,
Wuu rumaysan wayay, sheekadan uu indhihiisa ku arkaayo, wuu cudub bileste, kadibna istaaq-furuleyste, marlabaadna sheydanka iska naare, asagoo isla hadlaayana waxuuna ku dhace wadada, wax yar kadib markuu miirka ku soo laabte taleefoonkii wiilkiisa ayuu garaacay,maba-dhacaayo.
Dhankii siyaasada maanta waa laga nastay, waxa laysla dhexmaraya Mascuud iyo sheekadiisa,nin isna tijaar ah , oo xifaaltan dhinaca ganacsiga a ka dhexeeyo asaga iyo odey Fadxi, ayaa isna warkii maqlay, xooga buun-buunina iyo fadeexad ayuu isna suuqa u geliyay, si odey fadxi sumcada aga dilo.
Waa laba iyo tobankii duhurnimo, waxa gegida Istaanbuul ka dhooftay fanaanadii reer faransiis, waxay ku sii jeeday oo show ku qabanaysay dalka Ingiriiska. Mascuud, marku diyaaradii ku hubsaday saaxiibadii, ayuu u soo dhaqaaqay dhankii aqalkooda.
Aabbihii ayaa gurigii uga sii horeeyay, warkii oo tafa Tirana Mascuud hoyadiisa ku taabte!
Odaygii kursigii cuntada ayuu ku fadhiya, madaxna miiska ayuu dul saar saaray, islaantuna kursiga ka soo horjeeda ayay iyaduna fadhida, sidoo kalena madaxa ayey miiksa ku haysa.
Miiska waxa ku dul qaboobe qadadii la cuni laha, se qof na daboolka kamuu qaadin. Reerkiiba jaahwareer ba ku dhacay, inay tacsi u fadhiyaan ayaa la mooda!
Markuu marayo meel aqalkooda shandaqiiqo u jirta, ayuu taleefoonkii furay, markiiba waxa soo wacay, wiilkii walaashii qabay, waxuna ku dhehe:
– maxaad sharaftii aabbaha iyo shirkada ugu ciyaartay, nin caqli badan baan ku moodi jiray?
Mascuud oo aan dooc iyo dareen ba hayn, ayaa ku jawaabay
– yaah, yaah, maxaan haleeyay, ee dhacay, seedi sidaa ka noqotay, bal wax ii sheeg.
– hahahaaa, iskadaayo adna goormaad fanaan noqonaysa?
Seedigii meel dhow ayuu wax ka dareensiiyay, isla daqiiqadiiba wuu fahmay u jeedada.
Aqalkii buu soo galay, weliba maqsinkii fadhiga, waa jabaqla, labadiisii waalid mid waliba miiskii ayuu dhinac ugu qalalay, Joornaalkii odeyga dhiig-karka ku kiciye, hoyadiisana sokorta ku kiciye oo dhexdooda yaala ayuu gacanta la tiigsaday, sawirkii asa iyo jaceelkiida oo boga kowaad ku daabac ayuu idhaha saare, wixii ku qora ayuu akhriyay, hoos ayuu ku farxe, sawrika aad ayuu u qurux badaan, wejiga sxbtiisa iyo wajigiisa waxaa ka muuqde farxad iyo jaceel aan la qiyaasi karin,waxuu niyese inuu jaceelkooda waaro,14ka bisha labaadna waxaay noqote maalin qalbigiisa ku daabancte, waxaa ku cadaate in jaceylkiisa lama’ilaaban noqde, waayo 70ka million ee Turkiya ku nool ayaa ka warqabaan, Miskiyey nabad ku waar ayuu wadnaha iska dheh, hase-ahaatee waxaa fajac iyo layaab ku noqde inauu arko hoyadii iyo aabihii oo maxada miiska wada saarte.
Odaygii iyo islaantii way soo kakaceen, iyaga ilmaynaya,Mascuudna intuu kacay ayuu hoyadii iyo aabihii labada dhaban ka dhunkaday, oo ka raaligeliyay wixii dhacay.
Markoo xooga wareerka dege, Mascuud waxaa lagu dheh: “ hadii aad rabto inaan ku saamaxno, shuruudahan noo oofi” isna wuxuu ugu jawaabe: “wax kasta oo aad iga dal bataan waan oofinaya”
…. la soco Qeebta 4da oo ah qeebta usheekadan ugu danbeyso.
Miskii iyo Mascuud (2)
Miskii iyo Mascuud ( 4) dhamaadka sheekada